प्रिज्मा र प्रिन्सीको टिकटक बनाएरै लाखौं कमाई(भिडियो सहित) – Khabar PatrikaNp
September 24, 2020 249
काठमाण्डौ – ५ मिनेटको फरकमा जन्मिएका प्रिज्मा र प्रिन्सी खतिवडा टिकटकमा खुबै हि,ट छन् । उनीहरुको टिकटकमा लाखौं फलोअर्स छन् ।
टिकटकबाटै स्टार सेलिब्रेटीको द,र्जा पाएका उनी,हरुलाई अहिले म्यूजिक भिडियोमा खेलाउन गायक गायिकाहरुबीच हानाथाप हुने गरेको छ । उनीहरुलाई के वि,श्वास छ भने यी जुम्ल्याह दिदी बहिनीलाई अभिनय गराएपछि म्यूजिक भिडियोले बजार पि,ट्छ ।
यी दुईलाई चलचित्रबाट अभिनयको समेत प्र,स्तावहरु आइरहेका छन् । तर, उनीहरु तत्का,ल अभिनेत्री बन्ने सोचमा छैनन् ।
नाच्न आएर मात्र अभि,नेत्री नहुने उनीहरुको तर्क छ । उस्तै रुपरंग र शारीरिक बनावट भएका प्रिज्मा र प्रिन्सी ठूलो पर्दामा कहिले देखिन्छन्, धेरैका लागि प्रतिक्षा र चासोको विषय बनेको छ । यद्यपि, उनीहरु म्यूजिक भिडियोबाट दर्शक,माझ भने पु,गिरहेका छन् ।
टिकटकबाट रातारात स्टा,र भएका यी सुन्दरी दिदी बहिनीले अहिलेसम्म एक दर्जन बढी म्यूजिक भिडियोमा कम्मर कमाइसकेका छन् ।
चलचित्र ‘लभ डायरीज’ को ‘छम छम’ बोलको गीतमा समेत नृत्य गरिस,केका प्रिज्मा र प्रिन्सी अहिले ‘यस्तो बनोस् मेरो तीज’ बोलको गीतका कारण चर्चामा छन् । यो तीज गीतले इन्टरनेट रिलिजको एक हप्तामा ११ लाख भ्यू,ज प्राप्त गरिसकेको छ ।
गीतको भिडियोमा प्रिज्मा र प्रिन्सीको नृत्य र सुन्दरतालाई दर्शकहरुले निकै रुचाएका छन् । भिडि,योमा ‘बले’ नामले परिचित सागर लम्सालको पनि अभिनय छ । गायिका तथा संचारकर्मी अनिता चलाउनेको स्वर रहेको गीतमा बिपिन किरणका शब्द तथा दीपक शर्माको संगीत छ । गीतलाई दर्शकबाट मिलेको प्रति,क्रियाले गायिका चलाउने खुसी देखिएकी छन् ।
धेरै कमलाई थाहा छ, प्रिज्मा र प्रिन्सी खतिवडाले टिकटकमा भिडियो बनाएबापत पनि पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन् । आखिर एउटा भिडियो बनाएको कति पारिश्रमिक बुझ्छन् त उनीहरु ? ठूलो पर्दासँगको अन्तर्वार्तामा उनीहरुले भनेका छन्, ‘यति नै भन्ने छैन ।
हामीलाई फोन गरेर प्रमोसनल भिडियो बनाउन आग्रह गर्नुहुन्छ । सहमतिको आधारमा पारिश्रमिक लिने गरेका छौं ।’-ठुलोपर्दाटीभि।
Prevसिन्धुली जिल्लाकै सर्वोकृष्ट प्रमुख प्रहरी निरीक्षक शान्ता वाइबालाई छनौट
Nextदिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियालाई कोरोना पोजेटिभ र डेंगु
यी नै हुन् ! राजेन्द्र जसले १२ वर्षीया सम्झनालाई ब ला त्का रपछि ढुं’गा’ले मु’ख’मा हा’नेर मारे
आज कागेश्वरी महादेव मन्दिरमा गई पूजा आराधना गरेमा कागको स्पर्शबाट मुक्त भइने विश्वास
२ वर्षीय बालकले आमालाई मृत्युअघि हात हल्लाउँदै गरेको फोटो यो वर्षको उत्कृष्ट फोटो घोषित
‘वाउ म:म’ नामको ब्रान्ड भारतमै सर्वाधिक रुचाइएको र विश्वसनीय ब्रान्ड,नेपाली युवा विनोद हुमागाईं अहिले करोडपति बने
घाटबाट शव उठाएर अस्पताल, अचम्म भयो